भान्जा ले माइ जू भगा एर फेरी गरे फि र्ता मा मा म ख्ख (भिडियो सहित) – Taja Khawar
भान्जा ले माइ जू भगा एर फेरी गरे फि र्ता मा मा म ख्ख (भिडियो सहित)
प्रकाशित मिति: शनिबार, भाद्र १२, २०७८ समय: २:०९:४२
कस्तो चलन भन्जाले माइजू बिहे गरेर फिर्ता दिए मामा मख्ख पर्दै बस्दा श्रीमती लजाइन भाइरल भिडियो हेर्नुहोस्
भेडे खुर्सानी खानुका छन् यति धेरै फाइदै फाईदा: थाहा पाइराख्नुहोस्
खु`र्सानी अन्तर्गत मीठो र पिरो प्रकारका खुर्सा`नी आउँदछन् । नेपालमा पिरोलाई खुर्सानी र मिठोलाई भेडेखुर्सानी भन्ने गरिन्छ । भारतमा यसलाई शिमला मिर्च भनिन्छ । सम्भवतः भारतबाट यो तरकारी नेपालमा प्रवेश गरेको हो । भेडे खुर्सानीको लोकप्रियता नेपालमा बिस्तारै बढ्दै गएको छ ।
कैप्सिसिनको प्रयोग आयुर्वे`दिक र होमियोपेथिक औ`षधिमा गरिन्छ । टाउको दुखेको, दाँत दुखेको, शरीर दुखेको र दुख्न कम गर्ने दबाई बनाउन काम आउँछ । यसले एन्टीअक्सी`डेट (जीवनरक्षक) को रूपमा पनि काम गर्दछ ।
भेडे खुर्सानीकाे औषधीय गुण के हाे ? भेडे खुर्सा`नीको सेवनले ठन्डी, दम, श्वास`प्रश्वास प्रणालीमा समस्या र अर्वु`द रोगसंग लड्ने क्षमता बढाउँदछ । भेडे खु`र्सानीमा के के पाइन्छ ? भेडे खुर्सानी पोषिलो फल तरकारी हो । यो खुर्सानी भिटामिन “ए” र “सी” मा निकै धनी छ ।
जानौं भेडे खुर्सानीका फाइदाहरू: मेटाबोलिज्म बढाउ`नमा मद्दत गर्छ: तौल घटाउने सोच भएका`हरूका लागि भेडे खुर्सानीको सेवन निकै लाभदायक हुन्छ । यसमा क्यालो`री नगन्य मात्रामा हुन्छ जसले तौल घटाउनमा मद्दत गर्छ । यसले मेटाबोलिज्मको प्रक्रियालाई सक्रिय बनाउँछ ।
एन्टी अक्सीडेन्ट गुण: भिटामिन ए र सीले भरि`पूर्ण भेडे खुर्सानी एन्टी अक्सीडेन्ट्स`को राम्रो स्रो पनि हो । साथै मुटुसँग सम्बन्धित रोग, दम र मोतियाविन्दुबाट पनि बचाउनमा मद्दत गर्छ ।
क्यान्स`रबाट बचाउँछ: भेडे खुर्सानीको सेवनबाट क्यान्स`रको कोषलाई विकसित हुन दिदैँन । भेडे खुर्सानीको प्रयोग दिनहुँ कुनै न कुनै रुपले गर्नुपर्छ । भेडे खुर्सानीको सेवनले क्यान्स`र हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ ।
दुखाईमा राहत: भेडे खुर्सा`नीमा यस्तो तत्व पाइन्छ जसले छाला`को दुखाई`लाई स्पाइनल कोड सम्म जान दिदैँन । साथै यसमा पाइने तत्व प्राकृतिक पेन`किलर समान काम गर्छ ।
रोग प्रतिरो`धात्मक क्षमता बढाउँछ: भिटामिन सी ले भरिपूर्ण भेडे खुर्सानीले संक्रामक रोगहरूसँग लड्न मद्दत गर्छ । साथै शरीरमा रोग–प्रतिरो`धात्मक क्षमता`लाई वृद्धि गर्न पनि भेडे खुर्सानी उपयोगी हुन्छ । भेडे खुर्सानीको नियमित सेवनले फोक्सो`को इनफेक्शन, दम जस्ता समस्यामा पनि राहत मिल्छ ।
Last Updated on: August 28th, 2021 at 2:10 am